Ny endrike Gothique tamin'ny akanjon'ny Moyen Âge dia nivoaka avy amin'ny teny Frantsay, nandritra ny fanambanin'ny "Dark Age". Ny Gothique dia "haingo mampihorohoro", ary mifanaraka tsara amin'ny filazalazana ny fomba mampalahelo. Noho izany, ny endriny Gothique dia mampiseho henjana sy minimalism . Ny akanjo dia marihina amin'ny tarehimarika, saingy mbola ambentina izy io noho ny kofehy.
Fitafy any Eoropa medaily
Ao amin'ny akanjon'ireo lehilahy sy vehivavy, ireo singa toy ny kofehy marevaka amin'ny akanjo, akanjo lava mamirapiratra, ary koa akanjo vita amin'ny endriky ny tarehy, ary ireo kiraro maranitra voapetaka dia nihanihena. Ny lamaody dia ahitana lavalava lava ho an'ny lehilahy sy tady ho an'ny vehivavy. Tsara ny manamarika fa ela kokoa ilay vehivavy no nitaingina fiarandalamby, ny toerana ambony tao amin'ny fiarahamonina. Ny akanjon'ny gothika tamin'ny Moyen Âge dia nihevitra ny fampiasana lamba toy ny volombava, fa ny fananganana loko marevaka sy ny firavaka voninkazo. Ny loko mainty, malaza amin'ny Gothique maoderina, tamin'izany fotoana izany dia tsy nilaina.
Ny akanjon'ny vehivavy Medianina dia saka ary kamizu. Ny saka dia tery tery, volo lehibe sy kofehy. Araka ny efa voalaza tetsy aloha, ny tendany lava dia ny marika famantarana ny Gothique. Tokony ho fiaran-dalamby ny akorandriaka, ary ny bikabikany dia misy vala. Tena tsara tarehy tokoa ny manana lamba volomparasy ao amin'ny kibony. Ny akanjon'ireo akanjo dia mety ho ety na malalaka. Izy ireo dia voaravaka sary sokitra avy amin'ny lamba hafa, felam-boninkazo na lakolosy, izay mandrakotra ny ankiben-tanan-tanana. Satria ny fitafiana ivelany dia mampiasa rongony boribory na boribory miaraka amin'ny bobaka amin'ny endriky ny akanjo amin'ny tratra. Ary iray amin'ireo singa amin'ny akanjo akanjo Gothique amin'ny Moyen Âge dia fotsy hoditra. Ny vehivavy dia miteraka lozam-pifamoivoizana, izay toa nitovitovy tamin'ny tavoahangy misy lamosina ary misy sakany lava kokoa. Ny havoana dia vita tamin'ny lamba. Ankoatra izany, ireo vehivavy dia nitondra "cap de tandroka".
Saripikan'ny Taom-baovao vaovao
Kiraro akanjo mena
Fitaovam-piadiana ho an'ny Halloween
Akanjo akanjo ho an'ny zazavavy
Iza ny anaran'ny T-shirt lava lava?
Amin'ny inona no manao akanjo mainty mainty?
Tsetotype amin'ny fahavaratra - inona no loko mety sy fomba hisafidianana akanjo?
30 Septambra (Finoana, Fanantenana, Fitiavana) - famantarana
Fahamarinana am-pahendrena - inona no ao amin'ny filôzôfia?
Takona lavalava ao amin'ny efitrano fandroana
Fandefasana siramamy ho an'ny ririnina - fomba fitsaboana
Afangaro amin'ny tongotra
Inona no mahasoa amin'ny fety?
28 sary manaporofo fa ny fahaverezan'ny fahavoazana dia asa tsy misy dikany
Inona no asehon'ny taolana?
Lindsay Lohan momba ny karipetra mena 2016
Nolitsin miaraka amin'ny cystitis
Beautiful fampakaram-bady akanjo